Askartii Kenya ee lagu laayey Ceel-Cadde oo la ogaaday in badankood ay iyagu is-dileen | Xaysimo
Home War Askartii Kenya ee lagu laayey Ceel-Cadde oo la ogaaday in badankood ay...
Askartii Kenya ee lagu laayey Ceel-Cadde oo la ogaaday in badankood ay iyagu is-dileen
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa lagu daabacay qoraal uu sameeyay askari ka bad baaday weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen sanadkii 2016-kii xero ciidanka Kenya ay ka deganaayeen degaanka Ceel-Cadde ee gobolka Gedo.
Qoraalkaas ayaa waxaa lagu sheegay in qaar ka mid ah askartii ku geeriyootay weerarkaasi ay iyagu is dileen si ay uga badbaadaan in Al-Shabaab ay nolosha ku qabto.
Qoraalkaan oo uu sameeyay askari la yiraahdo Lance Eric Lang waxaa uu sheegay in askartii ku dhaawacantay weerarkaas ee ka bixi waayey xerada ay iyagu go’aansadeen inay is dilaan, kadib markii ay ku adkaatay inay banaanka u baxaan oo baxsadaan.
Markii la siiyey amarkaas is-toogashada ah ayuu sheegay inay ku qanceen si ay uga badbaadaan inay nolosha ugu gacan galaan dagaalyahanadii xerada soo weeraray ee Al-Shabaab.
“Dhowr askari oo ku jiray meel dhufays ah oo ay ku adkaatay inay banaanka xerada u baxsadaan sideyda oo kale ayaan arkayey iyaga oo xabado isku dhufanaya markii aan sii baxayay” ayuu yiri askariga Kenyanka ah ee qoraalkaan sameeyay oo lagu magacaabo Lance Eric la yiraahdo.
Si kastaba, waxaa is-weydiin mudan, maadaama askarta ay ahaayeen boqolaal, ama inat is dishay ay yihiin tobaneeyo, maxaysan u dagaalamin inta ay ka dhimanayaan, sabatoo ah cidna kuma qasbeyn inay is-dhiibaan, haddii aysan ayaga dooneyn.